Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qaata FTTB | Shiinaha FTTB Warshad qaata indhaha
Astaamaha 1. Heerka wax soosaarka RF wuxuu shaqaaleeyaa Awoodda Awoodda otomaatiga ah ee Awoodda (AGC), node kasta oo muraayadaha indhaha ah oo ku jira hal shabakad indhaha ah, haddii kaliya awoodda korantada ee indhaha ay ku dhexjirto -7dBm ~ + 2dBm, uma baahnin inaan wax ka beddelno qiimaha hoos u dhigga dusha sare. mashiinkan, waxaan xaqiijin karnaa heerka wax soo saar ee mashiinka oo dhan inuu sidiisa ahaado, CTB & CSO-na wali isma bedelin, way fududahay in la khaldo mashruuca. Madal 2.Operation loogu talagalay waa xx ~ 1000MHz. 3.Low-buuqa kordhiyo circuit u dhigma iyo kordhiyo ...
Laba Waddo FTTB Aragta Qaata ZBR1002D
Astaamaha 1.PIN tuubada sawir-qaadaha ee 'PIN' oo leh jawaab-celin sare; 2.Sheeg awooda muraayadaha si sax ah adoo u maraya tuubbooyin nuucaan ah oo toban nooc ah; Naqshadeynta habeynta wadadu waxay dhigeysaa marxaladda hore farsamada SMT iyo moduleka gadaal isu weyneeya isla markaana sameysanaya waddo caadi ah, taas oo ka dhigaysa gudbinta calaamadda korantada mid fudud oo fudud; Fududeynta 4.RF iyo isu-dheellitirnaanta labaduba waxay adeegsadaan naqshad isdaba-joog ah oo la hagaajin karo, taas oo ka dhigaysa khaladka injineernimada mid aad u habboon; 5.Power saarka m ...
ZBR1002B Dib-u-Qaadaha Fududeeyaha Dibadda
Astaamaha 1.Labada dherer ee shaqada ee 1310nm iyo 1550nm; Fursadaha 2.750MHz iyo 860MHz; 3. Awooda kaladuwan waa ikhtiyaari: AC60V, AC220V, dC-48V iyo ect; 4. Noocyo kala duwan oo ka mid ah cutubyada fiilada wax ku oolka ah: isku-duwaha isku-xirnaanta, isku-dhejiyaha isku-dhejiyeyaasha, qaybiyaha qaybiyaha furitaanka iyo habka gudbinta dariiqa gudbinta ee rogrogmi kara qaabeynta. U adeegso naqshadda unugyada fiilada ee ku habboon dayactirka cusbooneysiinta shabakadda; 5.Good tayo sare leh oo tayo sare leh oo loo yaqaan 'GaAs amplify module' ayaa dabooli kara baahiyaha wax soo saar heer sare ah; Hormarinta caalamiga ...
ZBR200 Laba Soo Saaraha FTTB AGC Qaataha Aragtida
Dulmarka guud ZBR200 waa aqbalkeena heer sare ah ee shabakada CATV qaata. Qalabkani wuxuu fasalka ka hor qaataa qalab-weyneedka Full-GaAs MMIC. Fasalka dambe waa Chip GaAs Shirkadda 'American ACA Company' oo ah koronto-dhaliye. Naqshadeynta wareegga wareega waxay ka dhigeysaa qalabka inuu gaaro tilmaamaha waxqabadka wanaagsan. Xakamaynta Microprocessor, muujinta dhijitaalka ah xuduudaha, khaladka injineernimada ayaa si gaar ah u fudud. Waa qalabka ugu weyn ee lagu dhiso shabakadda CATV. Sifooyinka 1) Tuubbada sawir-qaadaha ee sawir-qaadista PIN ee jawaabta sare leh 2) Optim ...